Fijoroana Kiorda: vaovao isan-karazany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2018 3:25 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Febroary 2006)
Miarahaba ny rehetra! tafaverina ihany aho ary nanambady. Ny mpandresy tamin'ny fifaninanana “Lohatenin-dahatsoratra Kiorda GV “ dia i Metin avy ao amin'ny Talk Turkey, ary ankafiziko manokana ny esoeso fa lehilahy Tiorka tsara fanahy no tonga niaraka tamin'ny anarana madio indrindra ho an'ny gazety Kiorda mpivoaka isan-kerinandro, mampiseho fotsiny ny fahatsapana firindrana sy fisokafana lehibe izay inoako fa ifantohan'ny Global Voices izy. Na izany aza, ireto ny fanavaozam-baovao ao amin'ny tontolon'ny blaogy Kiorda nandritra ny roa herinandro farany:
Manohy mitantara ny zava-niainany tamin'ny fampianarana tao Avaratr'i Iraka/Atsimon'i Kiordistana i Talk about the Passion. Miteny mafy i Thunder ao amin'ny toerana onenany ankehitriny ary manana voalavo izy saingy toa mankafy ny fitoerany ary hankalaza ny herintaona nampianarany tao Kiordistan.
Save RojTV kosa manohy ny ezak'izy ireo ho afa-miasa hatrany ary nanangona taratasy sy lahatsoratra avy amin'ny vondrom-piarahamonina Kiorda sy Eoropeana, avy amin'ny Vladimir fa tsy iza akory ny iray tamin'ireo lahatsoratra nalefa tamin'ity herinandro ity, izay manoratra ao amin'ny From Holland to Kurdistan (aseho isan-kerinandro eto).
Manohy manolotra ny tenany ho toy ny toeram-pivarotana iray tsy mitsahatra ho an'ny filàm-baovao Kiordistana Tatsinanana ny East of Kurdistan
The Is-Ought Problem kosa tafaverina antserasera miaraka amin'ny fanohanana ny Danoà.
Atolotry ny Pearls of Iraq tamin'ity herinandro ity ny vaovao farany momba ny gripam-borona ao Kiordistana. Misy ihany koa ny fandefasana lahatsoratra mahafinaritra momba ny adihevitra mikasika ilay sariitatra mampiadihevitra.
Ao anatin'izany ihany, manana lahatsoratra mahafinaritra momba ny Islamo, Mohammad sy ny mpisikera azy izay mijery ny fiantraikany ara-tantara i Roj Bash!. Ankoatra izany dia misy ny lahatsoratra mahafinaritra momba ny fandikan-teny ataon'ilay bilaogera Kiorda hafa izay manoratra voalohany indrindra amin'ny teny Kiorda momba io lohahevitra io ihany.
Manoratra momba ny hadalan'ny lahatsoratra an-gazety Tiorka vao haingana mitaky ny fanombanana indray ny Raharaha Kiorda ao Torkia i Rasti. Tamin'ireo lahatsoratra, nisy ny momba ireo mpikatroka Kiorda tahaka an'i Kani Xulam avy ao amin'ny Tambanjotram-baovao Kiorda Amerikana. Noresahana ny famonoana Kani hafa, Kani Yilmaz satria dòna ho an'ny vondrom-piarahamonina Kiorda ny zava-nitranga.
Nandefa filazana manjò momba an'i Kani Yilmaz ihany koa i Hiwa Hopes. Mamaly ny tsikera voarainy nandritra ny fifidianana tamin'ny fifidianana Irakiana izy. Namoaka momba ny fahombiazan'i Darin, mpihira Kiorda any Soeda ihany koa izy.
Hakatontsika amin'ny vaovao avy amin'ny From Holland to Kurdistan izay nanoratra lohahevitra samihafa, anisan'izany ny horonantsarimihetsika momba ny ady anti-Amerikana Valley of the Wolves-Iraq. Manoratra momba ny fihetsiketsehana Kiorda tamin'ny Tiorka sy ny fihetsiketsehana Kiorda amin'ny sariitatr'i Mohammad ihany koa izy. Ary amin'ireo vaovao mahafaly sy mampalahelo indrindra, manana lahatsoratra mahatalanjona momba ny lohahevitra tsy raharahiana eo amin'ny politika Kiorda i Vladimir, dia ny mombamomba ireo Kiorda ao Kurdistan Andrefana, Syria sy ny fiampangana ny governemanta ho mandevona ireo Kiorda velona ary avy eo eo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny lahatsoratra momba ireo miaramila Amerikana lasa naman'ireo Kiorda any Avaratr'i Irak/atsimon'i Kiordistana.